Fitsidihana ny tontolon’ny bilaogy alakamisy – jona 2005 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2019 3:37 GMT
Satria niteraka tabataba manerantany ny famoretana ataon'ny governemanta ao Zimbaboe antsoina hoe “Operation Restore Order (Hetsika Famerenana ny Filaminana)”, dia manoritsoritra ny zavatra toy ny “nijery ny endriky ny ratsy” i Sokwanele. The Zimbabwean Pundit kosa niantso ny hanaovana ankivy ny entana Afrikana Tatsimo mba hanoherana ny zava-misy fa afaka manao zavatra bebe kokoa amin'ny fifehezana ny filoha Mugabe ao Zimbabwe ny Filoha Afrikana Tatsimo Thabo Mbeki.
Congo Girl mamaritra ny atao hoe fomba fiainana sy ny fomba asa satria mihemotra ny firenena manoloana ny anatonan'ny fitokonana ankapobeny miha-mandodona, miampy tahotra mety hisian'ny fandrobana sy halatra amin'ny 30 jona, tsingerintana faha 45 taonan'ny fahaleovantenan'i RD Kongo avy amin'i Belzika.
The Arabist Network manana tantara voalohany momba ny fihetsiketsehana tany Cairo Avaratra. (Sary avy amin'ny Arabist Network, misy maro hafa ato.)
From Cairo With Love manontany hoe “Inona no olana amin'ny Ejypsiana?”
The Big Pharaoh manana fijery momba ny fifanakalozana ambasadera eo amin'i Ejypta sy Iraka.
Silly Bahraini Girl manana fanamarihana manesoeso momba ny “Demokrasia ao amin'ny Tany mahafinaritra.”
Hossein Derakhsan (Hoder) niverina tao Londra rehefa avy any Iran.
Omid ao amin'ny Iranian Prospect mihevitra fa ny fifidianana amin'ny Zoma dia ho tolona eo amin'ny saranga antonony sy saranga ambany ao Iran.
Babak Seradjeh ao amin'ny Free Thoughts on Iran mihevitra fa tsy mandalo amin'ny fifidianana amin'ity herinandro ity ny lalana mankany amin'ny demaokrasia.
Iran Scan manana hevitra vaovao mikasika ny fitsapan-kevitra, maminavina ny fandresen'i Rafsanjani.
Iraq the Model voatonona tao amin'ny AO/Technorati Open Media 100. Arahabaina!
Azia afovoany sy Kaokazy:
Afghan Warrior mitatitra momba ny famonoana mpiasan'ny fifidianana iray.
Registan.net manondro ity lahatsoratra mahaliana ity izay momba ny fanamafisana ny fifehezan'ny governemanta ny anaran-tsehatra .kz ao Kazakhstan.
Ao amin'ny Registan.net ihany, Nathan milaza ireo adihevitra amin'ny bilaogy mikasika ny tolona ara-jeopolitika ao Ozbekistan.
Blogrel manohy ny adihevitra mafana momba ny demaokrasia ao Armenia.
Ao Azerbaijan, Carpetblogger nahita zavatra hafahafa tamin'ny atrikasa momba ny varahina.
Ny fizarana etsy ambony dia nangonin'i Rebecca MacKinnon.
Ao amin'ny lisitry ny bilaogy Venezoeliana, VeneBlogs manondro [es] ny lahatsoratra iray ao amin'ny El Universal [es] izay manasongadina bilaogy Venezoelana telo natokana ho an'ny kanto ara-tsakafo …. Ny voalohany dia ny an'ilay sefo ara-tsakafo Sumito Estevez [es], izay vao nanokatra ny trano fisakafoana iray azy manokana. María Luisa Ríos, mpanao gazety monina ao Caracas manoratra momba ireo trano fisakafoanana, hetsika sy tsindrin-tsakafo eo an-toerana ao amin'ny bilaoginy Mil Sabores [es] (Tsiro an'aliny) ary farany, ny bilaogin'i Takeshi [es], avy amin'ny faritany Andeana ao Mérida dia soratan'ilay sefo Japoney amin'ny teny Espaniôla ary mifantoka amin'ny nahandro avy ao Andes Venezoeliana.
Velom-pankasitrahana i Rosario [en] fa “nanatevina ny laharan'ny firenena sivilize i Orogoay” .. izay mamaky an'i Harry Potter…
Eduardo Arcos avy any Mexico City indray nandrisika ny mpamaky handray anjara amin'ny fihaonambe voalohany amin'ny Weblogs.Communication [es] amin'ny 15 Jolay ao amin'ny Forum Cultural Coyoacan any Mexico City. Ankoatra ny fisoratana anarana amin'ny hetsika maimaim-poana, manentana ireo mpitantana ny fihaonambe mba handefa fampahafantarana fohy sy taratasy fotsy. Ity ny famaritana ny fihaonambe [es]. Handray fitenenana amin'ny fihaonambe ilay bilaogera Espaniola sady mpampianatra malaza, Dr. José Luis Orihuela Colliva.
Nangonin'i David Sasaki (el Oso) ny fizarana etsy ambony.
The Lost Nomad manaitra antsika amin'ny zava-misy fa ny PBS dia nandefa lahatsary fanadihadiana voalohany marobe (indrisy fa mivantana an-tseraseera ihany) momba ny fandaharan'asa nokleary ao Korea Avaratra. Misaotra an'i Asiapundit tamin'ny fampitrakàna.
ESWN manazava ny ezaky ny manampahefana manafina vaovao tsy hivoaka gazety ao Shina.
Ny China Digital Times manondro ny resaka an-databatra boribory OJR momba ireo sakana atrehin'ny bilaogera Shinoa.
Japanpundit manondro lahatsoratra manokana mifanohitra ao amin'ny pejin'ny Japan Times milaza ny tombontsoan'ny fihazana trozona; adihevitra mahaliana manoloana ny fanapahan-kevitra vao haingana noraisin'ny IWC izany mba hitsipahana ny tolo-kevitr'i Japana hiditra indray amin'ny famarotana trozona.
Sary avy amin'i RM Tunick
Ny Fifanarahan'i Bruxelles dia mamaritra ireo olana ara-pitsarana sivily “transnational” (miely manerana ny firenena roa na maro) ao amin'ny Vondrona Eoropeana; mahatonga ny fanaovana fihariana ao amin'ny Vondrona Eoropeana ho fandraharahana azo vinaniana mialoha kokoa. The Aseanist milaza fa mba hanatanterahan'ny ASEAN tanteraka ny zavatra mety ho vitany, dia mila ny endriny manokana amin'ny Fifanarahan'i Bruxelles izy .
The Insane Ox Relaoded, bilaogy akademika tsy fantatra anarana ao Malezia, manontany tena ny amin'izay tokony hatao mba hamohazana ny mpiara-miasa aminy.
Jeff Ooi manana fanontaniana mikasika mpamaky iray tsy faly sy izay tokony hataony.
Clair ao amin'ny Blah! miasa hanova ny endriky ny Filipina antserasera. Hetsika misy izany amin'ny ampahany noho ny zava-misy mampalahelo fa ny ankamaroan'ny pejy voalohan'ny voka-pikarohana “filipina” ao amin'ny Google dia tranokala momba ny ampakarina amin'ny alalan'ny mailaka.
Mr.Brown miresaka raha ny olona adala na tsia no sakaiza tsara kokoa.
Noodlepie miezaka mamerina mijery ireo zava-pisotro rehetra tsy misy alikaola amidy ao Saigon. Antenaina fa tsy hianjera daholo alohan'ny hamaranany azy …ny nifiny
Vichaar.org manondro antsika bilaogy tsy mitonona anarana nosoratana diplomaty Amerikana iray ao India.
United We Blog manontany tena mafy, momba izay nitranga tamin'ny Vaomieram-Panjakana Nepaley misahana ny Fanarahamaso ny kolikoly?